Duqeymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab oo ka dhacay Jubbada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Duqeymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab oo ka dhacay Jubbada Hoose
Duqeymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab oo ka dhacay Jubbada Hoose
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhacday duqeyn lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab sida ay SONNA u xaqiijiyeen saraakiisha Ammaanka Jubbaland.
Duqeynta oo xalay ka dhacday deegaannada Beerxaani iyo Golo Shumbi oo qayaastii 60 KM u jirta magaalada Kismaayo ayaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday saldhigyo ay maleeshiyaadkaasi ku lahaayeen deegaannada la duqeeyay.
Wararka ayaa sheegaya in duqeyntaasi ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya oo ku aadan arintasi.
Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka soo gaaray maleeshiyaadka Al-shabaab duqeyntaasi.
Muddooyinkii ugu dambeyeey waxaa soconayay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, ayadoo horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab lagu dilay howlgallo ka dhacay qeybo ka mid ah gobollada dalka.
Previous articleWasiirka Amniga “Waxaan dhisaynaa ciidamo gaar ah oo qaabilsan amniga madaxda iyo xarumaha dowladda”
Next articleBarlamanka Puntland oo codka kalsoonida kala laabtay golaha Wasiirada